Puntlandes.com | Author Archives | 1400
Home » Entries posted by puntlandes (Page 1400)
Daawo Video cusub: Muharaadkii looga soo horjeeday Xasan Culusoow
10 August, 2014 No Comment
Gudoomiyaha Maxkamada darajada Koowad ee ciidamada gobolka Bari, Karkaar, Sanaag iyo Haylaan Cabdifataax Xaaji Aadan Axmed ayaa galabta ka badbaadey isku-day dil oo lala damacsanaa
9 August, 2014 No Comment
Isku daygaan dilka ayaa dhacey kadib markii Gudoomiayaha uu ka baaqsadey safar uu ku tagi lahaa magaalada Bosaso isagoo ku hakadey magaalada Qardho. Cabdifataaax Xaaji Aadan ayaa safar uu kaga baxey maanta 9 Aug,2014 magaalada Garowe dabadeedna wuxuu ku hakaday C/fataax magaalada Qardho darawalkiisiina wuxuu u diray Bosaso dabadeedna waxaa wadada u galay darawalkii ciidan […]
Daawo Video: Xasan Culusoow oo caalamka la wareegaya in uu xukumo 25% dhulka Somalia iyo in ka badan 50% dadka Soomaaliya, Cajiib!
Xasan Culusoow ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah in uu ka bilaabay markuu xukunka imanayey meel eber ah. Isla markaasna wuxuu qirayaa in ay dowladiisu soo bilaabatay sanadku markuu ahaa 2000, bal adba!! Waxaa kaloo wax lagu qoslo ah in uu xukumo, (Xamar), 25% dhulka Somalia iyo in ka badan 50% dadka Soomaaliya, Cajiib! Waxaa […]
Daawo Video: Wasiirkii labaad ee xukuuma Gaas oo hanjaba
Garowe (Pes): Wasiirka Wasaarada Degaanka iyo Duurjoogta Mudane Guuleed Saalax Barre ayaa isagoo dalka ku soo laabtay hanjabaad aad u baaxad wayn u jeediyey ciidamadii mudada gaabnayn la wareegay TV ga Puntland iyo wax uu ugu yeeray dad dano siyaasadeed wata. Dadka danaha siyaasadeed wata ee uu Wasiirku u hanjabay waxaa fiicnaan lahayd in uu […]
Xog: Shirkadihii Shidaalka ka baarayey Puntland oo joojiyey shaqadii ay ka wadeen Puntland
Shalay, 08-08-2014, ayey Shaacisay shirkadii Shidaalka ka baaraysay Puntland in ay joojisay ilaa iyo inta uu Xasan Culusoow uga ogolaanayo in ay sii wadato shaqadeedii ay ka waday Puntland. Shirkadadaha Shaidaalka ka baarayey Puntland waxaa heshiis la galay oo soo bilaabay xukuumadii Puntland madaxweyne Gen Cade Muuse. Iyadoo ay sii horumariyey heshiiskaas xukuumadii uu madaxda […]
Xog muhiim ah: Safarka Xasan Culusoow ee Maraykanka iyo Guuldarada ka raacday
Warbaahinta caalamiga ah ee Puntlandes ayaa ilo xogogaal ah ka heshay in ay guuldaro ka raacday madaxweyne Xasan Culusoow shirarkii uu kaga qayb galay Maraykanka. Waxaa la isku raacay Xasan Culusoow na uu saxiixay in lacag Maraykanku ugu deeqay Soomaliya gaar ahaan dhisida ciidamada ay maamulaan wamada deriska gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya. Iyagoo ka […]
Faahfaahin: Safarkii Xaabsade uu ku wajahnaa Garowe
Bursaalax (Pes): Siyaasi Xaabsade oo soo gaaray maantay magaalada Bursaalax ayaa waxaa ilo xog ogaal ah u sheegeen Puntlandes in caawa uu ku hoyan doono Bursaalax. Kadibna uu ku wajahan yahay Garowe caasimada Puntland. Todobaadkii hore ayey ahayd markii Xaabsade walaalkiis Dolaal Cabdi Xaabsade uu kala goostay Somaliland ciidamo iyo tekniko fara badan. Arintan ayaa waxaa ka dambeeyey Xaabsade. […]
War deg deg ah: Axmed Cabdi Xaabsade oo ku soo wajahan maanta magaalada Garowe caasimada Puntland.
Bursaalax (Pes) Warbaahinta caalamiga ah ee Puntlandes ayaa ogaatay in Axmed Cabdi Xaabsade oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda Gobolka Sool uu maanta oo ah Sabti 09-08-2014 ka soo ambabaxay magaalada Wardheer hadana ku sugan magaalada Bursaalax isaga oo ku soo wajahan magaalada Garowe ee caasimada Puntland. Bursaalax ayaa waxaa ku soo […]
Daawo Video: Cali Khaliif Galayr iyo waxa Saaxdheer ka socdo
8 August, 2014 No Comment
Wararka Saaxdheer naga soo garaya ayaa sheegaya in halkaas lagu dhaariyey 19 xildhibaan oo ka mid ah noqonaya baarlamaanka Khaatumo o oka koobnaandoona 32 xubnood. Xaflada lagu dhaarinayey 19 kaas xidhibaan ayaa waxaa halkaa ka hadlay Galyr iyo ragu u ka mid yahay Garaab Abshir. Hoos ka daawo Xafiiska wararka Puntlandes.com
Page 1400 of 1417« First‹ Previous13981399140014011402Next ›Last »